I-cabin yesimanje yesimanje iye yaziwa kakhulu emhlabeni jikelele. Ngesizo salo, ungakha isimo esifana ne-Turkish hamam yokugeza. Kuyaqondakala ukuthi ngesikhathi esifanayo izinga lokushisa emoyeni ekamelweni liphakathi kwama-degree angamashumi amathathu namashumi ayisihlanu, kanti umswakama ungama-100%. Igumbi le-steam linokuphikisana okumbalwa kakhulu. Ukuvakashela ukugeza okuTurkey kungenzeka kulabo abangakwazi ukuvakashela ekamelweni langempela le-steam yaseRashiya. Lokhu kungasebenza kubantu ababhekene nezifo ezihlukahlukene eziyingozi zenhliziyo, asebekhulile, izingane noma abesifazane abakhulelwe.
Lapho umzimba womuntu ungena e-Turkish bath, ungafudumala ukushisa kwama- degrees angu-39 . Esimweni esinjalo, umuntu uqala ukuthuthumela kakhulu futhi, kanye nokuthuthumela, ama-slags ahlukahlukene kanye nezinto eziyingozi ziphuma emzimbeni. Ngenxa yalokho, ukukhathazeka komuntu kuphakama, uzizwa ehlala njalo futhi kunciphisa ukuhlukumeza jikelele emisipha.
Inzuzo yesikhahla samanje yesitimela yukuthi ngenxa yeminyango yezingilazi ezigqinsiwe ngaphakathi egumbini, ungenza isimo sezulu esifanele futhi lokhu akudingeki ukwakha igumbi elikhethekile lokugeza. Ukulinganisa kwala makakishi kungaba okuhlukile. Ikamelo elijwayelekile ngobude nobubanzi kunendawo ethile ngamasentimitha ayisishiyagalolunye. Ngokuvamile kaningi ukwakhiwa kwekona ngesimo sikwele, isikwele noma ingxenye yesigungu. Le design ikuvumela ukuba uhlele kangcono isikhala sendawo yokugezela. Abanikazi bezindlu zokunethezeka ezinamanzi okugeza amakhulu kungenzeka bakwazi ukuhlela ukwakhiwa kwe-cabin enkulu. Abanye babo bangaba namandla kubantu abangaba yisithupha.
I-quality steam cabin iyimisebenzi eminingi. Ngokwesibonelo, inkampani yaseJalimane iRepabad inikeza amakhasimende ayo imodeli emihle. Le nkampani ngumkhiqizi odumile wezinto zokunethezeka ezihlanzekile eYurophu. Inzuzo yamakhamera we-steam akhiqizwa lapha akukhona kuphela ekuthembekeni kwawo, kodwa futhi ekusebenzisaneni kwabo okuhlukahlukene. Eqinisweni, lokhu akuyona indawo kuphela lapho ungahlela khona igumbi elimnandi lomgwaqo, kodwa futhi neshafa elihle kakhulu kanye nekhamera ye-hydromassage esebenzayo.
Ngalesi sizathu, ama-cabins anesistimu yokukhiqiza isisindo esinokwethenjelwa, isimiso esihle sokugeza nesistimu ye-hydromassage. Futhi ungayiphatha kanjani yonke le misebenzi eminingi? Ngalesi sizathu, iphaneli yokulawula ekhethekile inikezwa. Kumele kuqashelwe ukuthi le iphaneli yokulawula ibonakala ngokucacile nokuthembeka kwayo. Ngaphandle kwemisebenzi okukhulunywe ngenhla, i-cabin yekhwalithi ephezulu ingahlonywa ngesistimu ekhethekile ye-chromo-, sound- ne-aromatherapy.
Lesizalo retroflexion: Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Bobumba imimese ukubuyekezwa kanye yokusetshenziswa
Epilator "Brown" - ithuluzi esisemqoka izinwele ukususwa